मेवा खाँदा हुने फाइदाहरू !! | सुदुरपश्चिम खबर
कोलेस्ट्रोलले मुटुको गति बढ्ने, उच्च रक्तचाप देखि लिएर मुटु रोगको कारण बन्न सक्छ । मेवाको रसमा टमाटरको रस मिसाएर पिउनाले कब्जियत समस्या हट्छ । मेवाको सेवनले यौनक्षमतामा समेत वृद्धि गर्छ । पाकेको मेवाको लेदो बनाएर अनुहारमा दल्नाले मुखको चाउरीपन पनि हट्छ ।
यो पनि ःभान्सामा प्रयोग गरिने चक्कु अब मसाजमा !!ःतपाई हामी सबैलाई थाहा छ, चक्कु सामान्यतया भान्सामा तरकारी, फलफुल र मासु काट्न प्रयोग गरिन्छ । तर अब भने मसाजका लागि चक्कुको प्रयोग गरिने भएको छ ।तपाईलाई यो टिप्स पढ्दा रोचक लाग्न सक्छ तर यो सत्य हो ।